« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူဘွိုင်လာ၏ကို Maintenance နှင့်မီးရှို့ခံရသောလုပ်ငန်းဘူတာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပင်လယ်ပြင်အားဖြင့်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည် »
ဗန်ဘူတာအပူစင်တာနှင့် Tatvan ဘူတာ4Noli ကုန်ပစ္စည်းများ 4734 အမှတ်များ၏မိသားစုအိမ် (လောင်စာရေနံ) အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝယ်ယူအဆိုပါအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအဆိုပြုချက်ကိုသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်, 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
KN: 2019 / 425628
က) အမည်: ဗန်နှင့် Tatvan Gara Gara Thermal ရေးစင်တာမိသားစုအိမ်ရာအမှတ်4(လောင်စာရေနံ) အပူပေးလောင်စာဝယ်ယူမှုအလုပ်
ဗန်အပူဗဟိုဘူတာရုံ (120.000 ကီလိုဂရမ်) Tatvan ဘူတာရုံမိသားစုအိမ် (140.000 ကီလိုဂရမ်) စုစုပေါင်း 260.000 ကီလိုဂရမ် (4 nolufuel ရေနံ) အပူပေးလောင်စာဝယ်ယူမှုအလုပ်အပါအဝင်
က c) / Place ကိုအပ်စေ: ဗဟိုအပူဘူတာဗန်, Tatvan Gara မိသားစုအပူစင်တာ residences
ဃ) အချိန် / ပို့ဆောင်မှုနေ့စွဲ: သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်စားသုံးမှု Delivery, 01.01.2020-31.12.2020 (12 လအတွင်း) သမိုင်းထူထောင်မှုအကြားလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးခြင်းဖြင့်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ဦးလိုအပ်အုပ်ချုပ်ရေး၏အမှု၌, ပထမဦးဆုံး 01.01.2020 အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပေးပို့သည့်နေ့စွဲ၏နေ့စွဲမတိုင်မီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သောငွေပမာဏကိုလောင်စာများ၏ပို့ဆောင်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကိစ္စတွင်ခေါငျးစဉျအောကျပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏မူဘောင်အတွင်းထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုချက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာ Specification များကအကြောင်းကြားရန် "4-Delivery စစ်ဆေးရေးနှင့်စမ်းသပ်မှု" ဟုအဆိုပါပေးပို့ဖျော်ဖြေဖို့ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါပေးပို့ကာလ (31.12.2020) ၏နောက်ဆုံးသောနေ့၌မဆိုလမ်းထဲမှာလောင်စာဆီဖြန့်ဝေပြီးနောက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အပူလောင်စာဆီ, သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းအဆိုပါနည်းပညာ Specification xnumx.madde တွင်ဖော်ပြထားသည့်အခြေခံမူများ၏မူဘောင်အတွင်းရေနံတင်သင်္ဘောသိုလှောင်ကန်များ TCDD အလုပ်ခွင်ထဲမှာကုန်တင်ကားအားဖြင့်မှုတ်ခဲ့ကြသည်ပေးပို့လိမ့်မည်။
ဃ) အလုပ်နေ့စွဲ စတင်. :
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 03.10.2019 - 14: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 12 / 07 / 2013 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 OF ယ်ယူရန်အပူရေနံလိမ့်မည်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရရုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပူလောင်စာ (ဆီရေနံအမှတ် 4) လိုအပ်ပါတယ်ဖြန့်ဖြူးအမှတ် 4734 19 ဝယ်ယူပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 85112 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာအဆောက်အအုံကော်မရှင်ဗျူရို34 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ xnumx.kat) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 34716 - 2163378214 ဂ) e-mail လိပ်စာ : komisyonsefligi@hotmail.co ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2163378214-တင်ဒါဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 16 / 01 / 2015 အပူလောင်စာ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 ၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 670000 ရေနံရောင်းလိုအားအလုပ်ပြန်လည်ရယူခြင်းအပူကီလိုဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဝိုက်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 179207 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာအဆောက်အအုံကော်မရှင်ဗျူရို34 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ xnumx.kat) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 34716 - 2163378214 ဂ) e-mail လိပ်စာ : komisyonsefligi@hotmail.co ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2163378214-နူးညံ့သော ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာ (လောင်စာရေနံ 4) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 29 / 09 / 2015 အပူလောင်စာ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (ဆီရေနံ 5) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ တစ်ဝိုက်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေး4NOL လောင်စာရေနံ (အပူပေးရေနံ) ဝယ်ယူဧည့်ခံလူထုဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 117521 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜ MAHALLESI STATION ကို CADDESI 1 44080 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalz ဂိမ်း @ tcdd.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 5-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာ (လောင်စာဆီ NO: 4) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 22 / 10 / 2015 STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) 4: အပူလောင်စာ (3 လောင်စာဆီ NO) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ ဗဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကီလို (ကီလိုဂရမ်) ၏အပူခံရဖို့ဒေသန္တရပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေး TCDD3ဒေသတွင်းချိတ်ဆက်ကျေးလက်၏ညွှန်ကြားမှုနှင့် 233000 အပူရေနံ (လောင်စာဆီအမှတ် 4) ဧည့်ခံ 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဝယ်ယူ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 138845 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI အဓိကFazılစတုရန်း 121 35220 Alsancak KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 232 464 31 31 - ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (လောင်စာဆီ NO: 4) 26 / 10 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး: အပူလောင်စာ (4 လောင်စာဆီ NO) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ တစ်ဝိုက်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးအပူရေနံ (ဆီရေနံအမှတ် 4) နံပါတ် 4734 ဧည့်ခံအပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 143199 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462237677 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgeihalekomisyo ။ ၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 4-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက် ... : gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်နေသည်
အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည်, TCDD5။ ဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာ (လောင်စာရေနံ 4) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာ (လောင်စာဆီ NO: 4) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (လောင်စာဆီ NO: 4)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာရေနံဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (အပူရေနံ)